युगसम्बाद साप्ताहिक - कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी आतंक : महासंकटका दिन निम्तिने खतरा !
Monday, 04.06.2020, 02:00pm (GMT+5.5) Home Contact
कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी आतंक : महासंकटका दिन निम्तिने खतरा !
Monday, 03.23.2020, 09:11am (GMT+5.5)
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वका १४८ देशलाई आफ्नो चपेटामा पारिसकेको छ । नेपाल अहिलेसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिएको जस्तो देखिए तापनि सम्भाव्य खतराका कारण आमजनमासमा ठूलो त्रास व्याप्त छ । सरकारले कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट जोगिन पूर्व सावधानी अपनाउँदै चालेका कदमको असर सवै क्षेत्रमा परिसकेको छ । अन्तर्रा्ष्ट्रिय हवाइ सेवा अधिकांश बन्द भएका छन् । विदेशीहरूका लागि उपलब्ध ‘अन एराइभल भीसा’ पूरै रोकिएको छ । सभा, समारोह र जमघटका कार्यक्रम रोकिएका छन् । संक्रमणबाट बच्न आवागमनमा नियन्त्रणदेखि लिएर कवारेण्टाइन, आइसोलेशन र उपचार प्रबन्धका लागि आवश्यक प्रबन्धमा सरकार अहोरात्र जुटिरहेको सन्देश प्रवाहित भैरहेको छ । खुला सिमाना रहेको भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्न अब चारवटा नाकामात्र खुला राखेर अरू बन्द गरिएका छन् । चैत ५ गतेपछि स्कूलहरू पूरै बन्द हुँदैछन् । आन्तरिक आवागमनमा पनि व्यापक कमी आएको छ । उद्योग धन्दा, व्यापार व्यवसाय ठूलो जोखिममा पर्नथालेको भन्दै उद्योगी व्यावसायीहरू सरकारसंग हारगुहार गर्नथालेका छन् । राजस्व असुलीदेखि लिएर विकास निर्माणका क्षेत्रमा नकारात्मक असर देखिनथालेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव र कालोबजारीले सर्वसाधारण जनता मारमा पर्नथालेका छन् । माक्सको अभाव र कालोबजारी रोक्न सरकारले ठूलै कसरत गरेको प्रतीत भए पनि सरल मूल्यमा सर्वसुलभताको अवस्था छैन । सरकारले कुनै वस्तुको अभाव हुन नदिने र पर्याप्त सञ्चित रहेको जानकारी दिइरहेको भएपनि अनपेक्षित त्रास र अविश्वासका कारण सञ्चितिको होड बढिरहेको छ । राज्य प्रबन्धप्रति विश्वास स्थापित हुन नसकेकै कारण सङ्कट गहिरिँदैगएको छ । प्रकोप नियन्त्रण र उचित उपचार प्रबन्धका लागि सरकारले व्यापक तयारी गरिरहेको सन्देश प्रवाहित भैरहे पनि जनमानस व्याप्त भय र सन्त्रास झनै फैलिइरहेको छ । मुलुकले भयावह आर्थिक संकट बेहोर्नुपर्ने आशंका घनीभूत भैरहेको छ । आर्थिक रूपले समृद्ध र प्राविधिक क्षमता भएका मुलुकहरू समेत कोरोना भाइरसको प्रकोप विस्तारबाट नराम्रोसंग ग्रसित देखिन थालेकाले नेपालजस्ता कमजोर मुलुकको हालत के हुने हो भन्ने सन्त्रासपूर्ण प्रश्न खडा भएको छ ।
पछिल्लो आँकडा अनुसार कोरोना भाइरस ग्रसितहरूको संख्या १ लाख ६० हजार नाघिसकेको मृतकको सख्या पनि ६ हजार नाघिसकेको छ । अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया जताततै कोरोनाको संक्रमण विस्तारित हुँदैगएको छ । युरोपमा इटली सर्वाधिक संक्रमित मुलुक बनेको छ । मृतकको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ । ४ करोड ६० लाख जनता क्वारेण्टाइनमा छन् । इरानमा पनि संक्रमित र मृतकको संख्या बढिरहेको छ । बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स लगायत युरोपका अधिकांश मुलुकमा कोरोना भाइरस विस्तारित हुँदैगएको छ । हरेक देशमा मृतकको संख्या बढिरहेको छ । अमेरिकामा मृतकको संख्या आइतवारसम्म ६० नाघेको छ र संक्रमितको संख्या बढ्दै तीन हजार नाघेको छ । अमेरिकाले युरोपका सवै हवाइ उडान बन्द गरेको छ । जताततै हाहाकारको स्थिति छ । हरेक देशका नागरिकलाई कोरोना भाइरसले त्रसित बनाएको छ । व्यापार व्यवसायमा नकारात्मक असर विस्तारित हुँदैगएको छ । विश्व अर्थव्यवस्थालाई कोरोनाले ठूलो धक्का दिन थालेको छ । भोलिका दिनमा कहाँ के हुने हो भन्ने त्रासले हरेक देशका नागरिकलाई उत्तिकै छोइरहेको छ । व्यवस्थापकीय क्षमतामाथि जताततै प्रश्न उठेको छ । २०१९को अन्त्यमा चीनको वुहानमा पहिलो पटक केस रेकर्ड गरिएको कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट ८० हजारभन्दा बढी चिनिया नागरिक ग्रस्त भएका र ज्यान गुमाउनेको संख्या ३१ सयको हाराहारीमा पुगेको भए पनि मार्चको पहिलो हप्ता चीनले आफ्नो देशमा कोरोना भाइरसको अन्त्य भएको घोषणा गरेको छ । तर नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारतलगायतका दक्षिण एसियाली देशहरूमा पनि कोरोनाको प्रकोप द्रूतगतिमा बढ्न थालेको छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूबीच ऐक्यबद्ध प्रयासको अपरिहार्यता बोध गरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रस्ताव र पहलमा गत आइतवार
दक्षीण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनमा आबद्ध आठवटै देशका कार्यकारी प्रमुख र प्रतिनिधिबीच भिडियो सम्मेलन भएको छ । २०७१ देखि भारतकै असहमतिका कारण थलापरेको सार्क भारतकै पहलमा पुनस् ब्युँतिने सम्भावना देखिएको छ । कोरोनाविरुद्ध लड्न संरचनागत सुविधाविस्तारका निम्ति संयुक्त कोषको प्रस्ताव गर्दै त्यसका लागि १ करोड अमेरिकी डलर भारतले उपलब्ध गराउने उदघोष प्रधानमन्त्री मोदीबाट भएको छ । अब सार्क राष्ट्रहरूबीच कस्तो रणनीतिक कार्यनीति बन्छ भन्ने उत्सुकता बढेको छ ।
नेपालमा हालसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमण एकाध बाहेक अरू नदेखिएको भए पनि यसको प्रत्यक्ष असर जनजीवनदेखि लिएर राज्यका यावत् गतिविधि र कार्यक्रममाथि परिरहेको छ । केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक मृगौलाको प्रत्यारोपण गरेर अस्पतालबाट निवास फर्किनासाथ चिकित्सकहरूले सावधान गराइरहँदा पनि सार्क राष्ट्रहरूबीचको भिडियो सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्न सिंहदरबार पुगेर कोरोनाविरुद्ध लड्न सरकारले विशेष तयारी गरिरहेको सन्देश प्रवाह गर्नुभएको छ । सार्कको अध्यक्षको हैसियतले नेपालले खेल्नुपर्ने भूमिका कोरोना संक्रमणले अरू बढाएको छ । उता सत्तारूढ दल नेकपाभित्र बढ्दो गुटगत चलखेल र अन्तर शक्तिसंघर्षका खेल प्रधानमन्त्री ओलीका लागि चुनौतीपूर्ण समस्या बन्दैगएका छन् । समसामयिक राजनीतिका सर्वाधिक चतुर खेलाडीका रूपमा उहाँ चिनिँदैआए पनि सीमित घेरा तोडेर समायोजनकारी राजनीतिक निकाल्न उहाँलाई सजिलो देखिएको छैन । नेकपाभित्र पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको राग मेटिएको छैन भने ह्याकुलाले मिचेर आफ्ना समकक्षी सवैलाई ठेगान लगाउने उहाँको प्रवृत्तिले पनि उल्टै समस्या उब्जाइरहेको छ । चिकित्सकहरूले उहाँलाई ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म धपडीको काम नगरी आराम गर्नुपर्ने राय दिइरहेका भएपनि उहाँ सक्रियता देखाएर परिआएका सवैखाले समस्यासंग जुध्ने कसरतमा लाग्नुभएको प्रतीत हुँदैछ । निकट भविष्यमा कोरोना भाइरसले कुन रूप र गति लिने हो भन्ने सन्त्रास एकातिर फैलिरहेको छ भने अर्कातिर नेकपाभित्र चर्किँदैगएको अन्तरसंघर्षले कतिखेर कुन रूप लिने हो भन्ने सन्त्रास पनि उत्तिकै छ । कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन संसदमा दर्ता भएको संकल्प प्रस्ताव तुहाउन भैरहेको साजिस र भारत अतिक्रमित नेपालभूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारले गरिरहेको विलम्ब वारे उठेका प्रश्नहरूले पनि ओली सरकारलाई सकसमा पार्दैलगेको देखिँदैछ । नेपालमा महासंकट निम्तिने खतरा बढ्दो छ । सामान्य अवस्थामा समेत गति लिन नसकेको पृष्ठभूमिमा कोरोना संक्रमणले सिर्जना गरेको असामान्य अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र कति डामाडोल हुने हो भन्ने चिन्ताले जताततै घरगर्न थालेको छ ।
नक्सा प्रकाशित गर्न कसले रोक्यो, केले छेक्यो !? (03.23.2020)
मोदीको आतुरताले जुटाइदिएको सार्क राष्ट्रको एकता (03.23.2020)